Sida loo Yareeyo Saameynta Raadinta Marka Aad U Guureyso Domain Cusub | Martech Zone
Sida loo Yareeyo Saameynta Raadinta Marka aad u guureyso Domain cusub
Monday, June 20, 2016 Axad, Janaayo 29, 2017 Douglas Karr
Sida shirkado badan oo kobca oo udub dhexaad u ah, waxaan leenahay macmiil magacyadiisa u hayaamayo oo u guuraya degel kale. Saaxiibbadayda sameeya hagaajinta mashiinka raadinta ayaa hadda xajinaya. Koodhadhku waxay dhisaan maamulka waqti ka dib oo ay ka takhalusaan awooddaas ayaa hakin karta taraafikadaada dabiiciga ah.
Iyadoo Google Search Console ay bixiso a beddelka aaladda domainka, waxa ay dayaceen inay kuu sheegaan ayaa ah sida ay howshani u xanuun badan tahay. Way ku xanuunaysaa… xun. Waxaan ku sameeyay isbeddel domain sanado badan ka hor boodhka Tiknoolajiyadda Suuqgeynta si aan ugala soocno sumadda magaca magacayga shaqsiyeed, waxaanan lumiyay ku dhowaad dhammaan ereyadaydii muhiimka ahaa ee mudnaa oo ay weheliyaan. Muddo ayay qaadatay in aan dib u helo caafimaadka dabiiciga ah ee aan markii hore haystay.
Waad yareyn kartaa saameynta qiimeynta raadinta dabiici ah adoo sameynaya xoogaa qorsheyn horay ah iyo dil kadib, in kastoo.
Waa tan liiska qorshaynta hore ee SEO
Dib u eeg bogga dambe ee cinwaanada 'backlinks' - Way adag tahay in la helo domain aan horay loo isticmaalin. Ma ogtahay in cinwaanka horay loo adeegsaday iyo inkale? Waxay ahaan lahayd hal warshad weyn oo SPAM ah oo gebi ahaanba laga xannibo matoorada raadinta. Ma ogaan doontid illaa aad ka sameyso xisaab-celin dhab ah oo ku saabsan bogga cusub oo aad ka gaabsato xiriir kasta oo shaki leh.
Dib u eeg backlinks-ka jira - Kahor intaadan u guurin degel cusub, hubi inaad aqoonsatid dhammaan gadaal-celinta gaarka ah ee aad hadda haysato. Waad sameyn kartaa liistada bartilmaameedka oo kooxdaada PR waxay la xiriiri kartaa goob kasta oo adiga kugu xiran si aad u weydiiso inay cusbooneysiiyaan xiriirkooda cinwaanka cusub. Xitaa haddii aad gacan muggeed hesho, waxay ku dambayn kartaa soo noqoshada ereyada muhiimka ah qaarkood.
Xisaabaadka Goobta - fursadaha ayaa ah inaad leedahay hanti summad leh iyo xiriiriyeyaal gudaha ah oo dhammaantood xiriir la leh boggaaga hadda jira. Waxaad ubaahantahay inaad bedesho dhamaan xiriiriyeyaashaas, sawirada, PDF-yada, iwm oo aad hubiso in la cusbooneysiiyay markii ay si toos ah ula sii noolaanayaan barta cusub. Haddii bartaada cusubi ku jirto jawi isdaba-joog ah (aad loogu taliyay), haddaba samee tifaftirkaas.
Aqoonso boggagaaga dabiiciga ah ee ugu adag - waa maxay ereyada muhiimka ah ee lagugu qiimeeyay iyo boggee? Kuwani waa qiimeynta aad rabto inaad kormeerto adigoo adeegsanaya aalad sida lammaanayaasheena 'at shaybaarada gShift. Waad garan kartaa ereyada muhiimka ah ee la calaamadeeyay, ereyada muhiimka ah ee gobolka, iyo ereyada muhiimka ah ee aad ku saleyso ka dibna aad cabbiri karto sida wanaagsan ee aad dib ugu laabaneyso ka dib isbeddelka bogga.
U hagaaji domainka si sax ah - Waxaad ubaahantahay inaad 301 u wareejiso URL-yadii hore URL-yada cusub ee leh cinwaanka cusub ee saamaynta ugu yar. Uma baahnid in qof kastaa yimaado boggaaga cusub ee boggaaga iyada oo aan wax ogeysiis ah lagaa helin. Haddii aad ka fariisato bogagga qaarkood ama alaabooyinka, waxaad u baahan kartaa inaad u keento bog ogeysiis ah oo ka hadlaya isbeddelka sumadda, sababta ay shirkaddu u sameysay, iyo halka ay ka heli karaan caawimaad.
Ka diiwaangeli domainka cusub Maamulayaasha Websaydhada - Isla markaaba gal Webmasters-ka, diiwaangeli bogga cusub, oo soo gudbi maabkaaga mareegta ee XML si boggan cusub isla markiiba u xoqdo Google isla markaana makiinadaha wax raadintu u bilaabaan inay cusbooneysiiyaan
Fuli Bedelka Cinwaanka - u maro nidaamka beddelka aaladda cinwaanka si aad Google u ogeysiiso inaad u guureyso degel cusub.
Hubi in falanqaynta ay si sax ah u shaqeyneyso - Soo gal Analytics oo cusbooneysii URL-ka guriga. Ilaa iyo inta aad ka leedahay meelo badan oo caadooyin ah oo la xidhiidha domainka, waa inaad awood u yeelato inaad isku mid ahaato Analytics la xisaabtama cinwaanka oo sii wad cabirka.
Ogeysii boggaga ku xiraya duuggii hore - Xusuusnow liistadaas oo aan ka sameynnay isku xirnaanta ugu kalsoonida badan ee la xiriirta? Waa waqtigii lagu soo diri lahaa guryahaas oo loo arki lahaa inay ku cusbooneysiiyaan maqaalladooda macluumaadka ugu dambeeya ee xiriirka iyo calaamadeynta. Hadba sida aad ugu guuleysato halkan, sida ugu wanaagsan ee qiimeyntaadu u soo noqon doonto.
Hantidhowrka Boostada kadib - Waqti aad ku sameyso xisaab hubin kale oo goobta ah iyo inaad laba jeer hubiso inaadan haysan wax isku xirayaal gudaha ah oo tilmaamaya duuggii hore, wixii sawirro ah oo xusaya, ama dammaanad kale oo u baahan in la cusboonaysiiyo
La Soco Qiimeynta iyo Isu Socodka Noolaha - La soco qiimeyntaada iyo taraafikada dabiiciga ah si aad u aragto sida wanaagsan ee aad uga soo kabaneyso isbeddelka bogga.
Kordhi dadaalkaaga Xiriirka Dadweynaha - Waa waqtigii la raaci lahaa khad kasta oo aad gacmahaaga ka heli karto hadda si aad uga caawiso shirkaddaada inay dib u soo ceshato hay'addeeda mashiinka raadinta iyo jiritaanka. Waxaad rabtaa sheeko badan halkaas!
Waxaan sidoo kale si aad ah ugu talin lahaa taxane ka kooban waxyaabo cayiman oo la daabacay si loo sameeyo buufin weyn. Laga soo bilaabo ogeysiiska calaamadeynta iyo waxa ay uga dhigan tahay macaamiisha hadda ku jirta sawirrada iyo waraaqaha cadcad si ay uga codsadaan jawaab weyn bogagga ay khuseyso.
Tags: socdaalka domainmareegaha googledomain cusubguuritaanka domainka cusub
SEO PowerSuite: 5 Siyaabood oo Degdeg ah oo Natiijooyin loogu helo Milkiileyaasha Goobta Mashquulsan
Sayniska Ka Dambeeya Soo Bandhigida, Xusuus-qaadka Iyo Soo-Bandhiga Suuq-geynta
Jun 26, 2016 at 11: 21 PM
Kuwani waa tilmaamo aad u fiican! Xaqiiqdii waa bummer markii ereyadaada muhiimka ah ee qiimeeya ay si aad ah u liqi doonaan markaad dib u dejiso degel cusub. Waxay u egtahay inaad dhunkato dhammaan shaqadaada oo aad bilowdo inaad markale sameyso.